प्रकृतिले त्राण पाएको समय - विविधा - कान्तिपुर समाचार
प्रकृतिले त्राण पाएको समय
सन्दर्भ : विश्व पृथ्वी दिवस
वैशाख १०, २०७७ गोविन्द पोखरेल
आज विश्व पृथ्वी दिवस । ५०औं वर्षमा आइपुग्दा यो दिवस ‘भर्चुअल’रूपमा अनलाइनमार्फत विभिन्न कार्यक्रम तथा बहस गरेर मनाइँदै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले विश्व नै ‘लकडाउन’ छ । मानिसहरू घरमै बसेका छन् ।
सवारीसाधन कुदेका छैनन् । उद्योग तथा कलकारखाना बन्द छन् । यो मौकामा वायुको गुणस्तर सुध्रिएको छ । प्रदूषण स्वात्तै घटेको छ । नदी सफा देखिएका छन् । हिमाल र डाँडाकाँडा छर्लंग छन् ।
ध्वनि प्रदूषण नहुँदा सहरमा चराचुरुंगीको आवाज प्रस्टै सुनिन्छ । जीवजन्तुले बिनारोकतोक प्रकृतिमा रमाउने मौका पाएका छन् । यी सबै हुनुमा एउटै कारण छ– मानवीय गतिविधिमा कमी आउनु ।
मानौं, समग्र प्रकृतिले त्राण पाएको छ यतिखेर । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन, प्रदूषण, फोहोर, वन फँडानीलगायत गतिविधि ठप्प छन् । एककोषीय कोरोना भाइरसले खर्बौं कोष मिलेर बनेको मानिसलाई घरभित्रै बस्न बाध्य जो बनाइदिएको छ ।
सन् १९६९ मा अमेरिकाको क्योलिफोर्निर्यास्थित सान्ता बारबार नहरमा तेल चुहिएपछि परेको वातारणीय प्रभावले मानिहरूलाई समग्र पृथ्वीबारे सोच्न बाध्य बनायो । प्रशान्त महासागरमा पर्ने नहरमा ८० हजारदेखि १ लाख ब्यारेल कच्चा तेल फैलिँदा भयावह अवस्था निम्तिएको थियो । त्यसैलाई लिएर वातावरणीय मुद्दाहरू उठ्दै जाँदा १९७० अप्रिल २२ देखि पृथ्वी दिवस मनाउन थालिएको हो ।
५०औं दिवस जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा न्यूनीकरणका लागि दबाब दिने गरी ‘क्लाइमेट एक्सन’सँग जोडिएको छ । तर, कोरोनाका कारण बेलायतमा हुने भनिएको कोप २६ स्थगित हुन पुग्यो ।
मानवीय अतिक्रमण, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनले जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, प्रजातिको विनाश, तापक्रम वृद्धिजस्ता अनेकौं समस्या पृथ्वीमा देखिएका छन् ।
लकडाउनपछि मानिसहरु घुम्न नआएपछि दक्षिण अफ्रिकाको क्रुगर राष्ट्रिय निकुञ्‍जकै बीच सडकमा मस्तसँग आराम गरिरहेका सिंह तस्बिर : निकुञ्‍जको फेसबुकबाट
तापक्रम परिवर्तनसँगै वन्यजन्तुको वासस्थान विनाशले गर्दा पछिल्लो समय विभिन्न संक्रामक रोग आउने गरेका छन् । अहिले देखिएको कोरोना भाइरस चमेरो हुँदै मानिसमा सरेको अनुमान गरिएको छ । घरपालुवा जनावरहरू वन्यजन्तुमा भएका जीवाणु मानिसमा सार्ने एउटा माध्यम रहेको यूएनईपीले जनाएको छ । यूएनईपीका अनुसार ६० प्रतिशत संक्रामक रोग वन्यजन्तुबाट सरेका छन् । इबोला, मर्स, सार्स, जाइकाजस्ता भाइरस यसै गरी मानिससम्म आइपुगेका हुन् ।
वन्यजन्तुको वासस्थान मिचिँदा उनीहरू बस्तीतिर आउँछन् । घरका चौपाया र खाद्यान्न खाइदिन्छन् । तिनैमार्फत भाइरस सर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘जसरी मानिसको अतिक्रमणबाट प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रिएर कोभिड–१९ जस्तो महामारी आएको छ । यस्ता कुरा भविष्यमा हुन नदिन हामीले पृथ्वीको सन्तुलन बिग्रन नदिने उपाय खोज्नुपर्छ,’ वातावरणविद् आस्था जोशीले भनिन् । पृथ्वी मानव जातिको मात्रै नभएर अन्य प्रजातिको पनि रहेकाले उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
सन् २०१९ को यूएनको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो शताब्दीमा प्रजातिहरूको विनाश सय गुणाले बढेको छ । दश लाख प्रजाति विनाशको जोखिममा छन् । यसको कारण मानवीय अतिक्रमण र जलवायु परिवर्तर्नलाई औंल्याइएको छ ।
इन्टरगभर्नमेन्टल प्लेटफर्म अन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस (आईपीबीईएस) को प्रतिवेदनले आगामी दिन मानिसलाई झन् चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले जीवहरूको विनाश बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रतिवेदनले वैकल्पिक स्रोत तथा ऊर्जा खपतमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।
शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन वार्षिक ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने यूएनईपीको इमिसन ग्यास रिपोर्ट २०१९ मा उल्लेख छ । त्यो गर्न नसकिए हिउँ दुई तिहाइले पग्लने इसिमोडको हिन्दूकुश हिमालय एसेसमेन्ट रिपोर्टको प्रक्षेपण छ ।
तस्बिर : निकुञ्‍जको फेसबुकबाट
५० वर्षयता मानिसको जनसंख्या दोब्बरले बढेसँगै वन फँडानी तीव्र छ । त्यही अनुपातमा संक्रामक रोग फैलिएका छन् । कार्बन उत्सर्जन २१ प्रतिशत र समुद्रहरूको अम्लीयपन ४ प्रतिशतले बढेको छ । ग्रिन ल्यान्डको बरफ पग्लने वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुगेको छ । समुद्री सतह हरेक दशकमा ३.३ प्रतिशतले बढ्दै छ ।
यहीबीच पृथ्वीलाई मानवीय अतिक्रमणबाट जोगाउन प्रयास नभएका होइनन् । वैकल्पिक ऊर्जार् प्रयोग गर्न थालिएको छ । ‘रिस्टोरेसन’ कार्य तथा वृृक्षरोपणलाई तीव्रता दिइएको छ ।
ब्रह्माण्डमा एक हजार माइल प्रतिघण्टाका दरले हुइँकिइरहेको एउटा ‘जीवित यान’ हो पृथ्वी । यसका रैथाने हौं हामी । यहीँको पानी, वनस्पति, जमिन उपयोग गरेर बाँचेका छौं । हामीले आफैंलाई जोगाउन पनि वातावरण जोगाउन जरुरी छ । यसका लागि सचेतना र अनुसन्धान बढाउँदै प्रकृतिमाथि मानवीय अतिक्रमण र उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, विद्युत्मा जोड दिन सके हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन स्वतः कम हुनेछ । प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १५:४८
के गर्दै छ नाष्ट ?
चैत्र २९, २०७६ गोविन्द पोखरेल
काठमाडौँ — विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको सर्वोच्च संस्था नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले कोभिड-१९ रोकथाम तथा परीक्षण सन्दर्भमा तयारी थालिरहेको जनाएको छ।
लकडाउन सुरु हुनुअघिदेखि नै आफूहरुले कोभिडसम्बन्धी काम गरिरहेको नाष्टका उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए। सर्वसाधारणहरुलाई कोभिडसम्बन्धी जनचेतना र जानकारी दिनुका साथै सेनिटाइजर उत्पादनमा नाष्टले काम गरेको उनको भनाइ छ।
लकडाउन सुरु हुनुअगावै नाष्टले ललितपुर महानगरपालिकाका सबै वडाका प्रतिनिधिहरुलाई घरेलु मदिरासमेतको मिश्रणबाट सेनिटाइजर तयार गर्ने तालिम दिएको थियो। ‘भाइरस सर्नबाट जोगाउनका लागि हामीले गरेको पहिलो काम सेनिटाइजर निर्माण तालिम थियो,’ उपकुलपति श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अन्य संस्थाहरुले निर्माण गरेका सेनिटाइजरको परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे काम गरिरहेका छौं।’
नाष्टले आफ्ना १३ वटा विषयगत विज्ञ समितिमध्ये अहिले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सन्दर्भमा मेडिकल र बायो टेक्नोलोजी समितिलाई सक्रिय बनाएको छ। डा. अशोकरत्न बज्राचार्य संयोजक रहेको मेडिकल समिति र डा. मुकुन्द रञ्जित संयोजक रहेको बायो टेक्नोलोजी समितिले काम थालिसकेका छन्। यी समितिहरुले सम्बन्धित संस्थासँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेको उपकुलपति श्रेष्ठले जानकारी दिए। ती विषयक समितिले नियमित छलफल तथा आवश्यकताबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।
यस्तै, युवा वैज्ञानिक फोरमलाई पनि नाष्टले सक्रिय बनाएको छ। उक्त फोरममा आबद्ध वैज्ञानिकहरुले कोरोनासम्बन्धी नेपालमा चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छन्।
यस्तै, बायो सेफ्टी लेभल (बीएसएल) ल्याबलाई अन्य क्षेत्रमा बढाउने र र त्यसको आवश्यकताबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए। उपकुलपति श्रेष्ठका अनुसार साधारण पीसीआर मात्रै रहको नाष्टसँग रियल टाइम पीसीआर छैन। आरटी पीसीआर चलाउन सक्‍ने जनशक्ति भने ४ जना रहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित अनुसन्धान समितिको संयोजकसमेत रहेका उपकुलपति श्रेष्ठले अहिले नेपालमा कोरोना सम्बन्धीको वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गरिने विधि, मापदण्ड र प्रोटोकल बनाउने तयारीमा नाष्ट रहेको बताए। नाष्टले नेतृत्व गरिरहेको उक्त समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन डा. रामप्रसाद खतिवडा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका जनार्द्धन शर्मा, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सञ्जय पोखरेल र पोखरा विश्वविद्यालयका विष्णुराज तिवारी,कृषि तथा वन विश्‍वविद्यालयका शारदा थपलिया,रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक रामेश्‍वर अधिकारी छन्।
'वैज्ञानिक तथ्य र अनुसन्धान गरेर नेपालमा कोरोना संक्रमणको फैलँदो ‘ट्रेन्ड’बारे कसरी अध्ययन गर्नेमा कार्ययोजना तयारी गरिरहेका छौं,' उपकुलपति श्रेष्ठले भने, 'यस्तै, कोरोनाको ट्रेन्ड एनालाइसिस र मोडलिङ गरेर प्रक्षेपणको तयारी भइरहेको छ।'
'फोकल प्वाइन्ट आवश्यक'
उपकुलपति श्रेष्ठले कोभिड-१९का सन्दर्भमा तथ्यांकहरु एकीकृत गर्न एउटा फोकल प्वाइन्टको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्। उक्त संस्थाले अनुसन्धानको नेतृत्व लिएर अन्य संस्थाहरुलाई परीक्षण तथा अनुसन्धानमा लगाउन सक्‍ने उनले बताए ।
'राम्रो समन्वय कुन संस्थाले के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन,' उनले भने। राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ज्ञान केन्द्रको स्थापना भएमा विभिन्‍न संघसंस्थाहरुको तथ्यांक संश्लेषण भएर कार्ययोजनामा सहज हुने बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ २१:१९
अपडेटः शनिबार, १७ जेठ, २०७७ । १५ : ०० बजे
अंगराज तिमिल्सिना जेष्ठ १६, २०७७